Ndị na-emepụta igwe na-emepụta ihe & ndị na-ebubata - Ụlọ ọrụ igwe na-emepụta ihe nke China
SLG-850-850L nkuku cutter & grooving igwe
Ụdị SLG-850 SLG-850L
Ihe kachasi nha: 550x800mm(L*W) 650X1050mm
Nha nkeji ihe: 130x130mm 130X130mm
Nkwalite Nkịtị: ± 0.1mm
Nkwalite kacha mma: ± 0.05mm
Ogologo mgbụsị akwụkwọ nkuku: 13mm
Ọsọ: 100-110pcs / min nwere 1 feeder
Igwe eji akwa akwa dijitalụ akpaaka
Nha ihe: 120X120-550X850mm(L*W)
Nke kacha mma: ± 0.05mm
Nkịtị ziri ezi: ± 0.01mm
Ọsọ kacha ọsọ: 100-120pcs / min
Ọsọ ọsọ: 70-100pcs/min
AM600 Akpata Igwe Ọdụdọ Magnet
The igwe adabara akpaka mmepụta nke akwụkwọ style isiike igbe na magnetik mmechi.Igwe ahụ nwere nri akpaaka, mkpọpu ala, gluing, ịtụtụ na idowe diski magnetik/ iron.Ọ nọchiri ọrụ ntuziaka, na-egosipụta na arụmọrụ dị elu, kwụsiri ike, ọnụ ụlọ kọmpat chọrọ yana ndị ahịa nabatara ya.
ZX450 Ọkpụkpụ Cutter
Ọ bụ ngwá ọrụ pụrụ iche na akwụkwọ ndị siri ike.A na-eji ya mara mma na-arụ ọrụ nke ọma, ọrụ dị mfe, nkwụsị nke ọma, nkenke dị elu na arụmọrụ wdg. A na-etinye ya n'ịbelata ọkpụkpụ azụ nke akwụkwọ ndị siri ike.
Igwe eji eme okirikiri RC19
Mee ka ọkọlọtọ nkuku kwụ ọtọ ka ọ bụrụ gburugburu, ọ dịghị mkpa usoro mgbanwe, ị ga-enweta akụkụ okirikiri zuru oke.Maka radius nkuku dị iche iche, naanị gbanwee ụdị dị iche iche, a ga-edozi ya nke ọma n'ime otu nkeji.
ASZ540A igwe mpịachi akụkụ 4
The ụkpụrụ nke 4-Side mpịachi Machine na-eri nri n'elu akwụkwọ na osisi nke e positioned site Pre-pịa, mpịachi ekpe na n'akụkụ aka nri, Pịa akuku, mpịachi n'ihu na azụ n'akụkụ, Pịa evenly usoro, nke niile na-akpaghị aka na-aghọta anọ n'akụkụ mpịachi.
Igwe a jikọtara ya na atụmatụ dị oke elu, ọsọ ọsọ ọsọ, mpịakọta akuku prefect na mpịachi akụkụ na-adịgide adịgide.A na-etinyekwa ngwaahịa a n'ọtụtụ ebe n'ịmepụta Hardcover, Akwụkwọ ndetu, nchekwa akwụkwọ, kalenda, kalenda mgbidi, casing, igbe onyinye na ihe ndị ọzọ.
Ndepụta akụrụngwa akwụkwọ nke ọkara-akpaaka
Igwe mkpuchi mkpuchi dị elu ST060H
Igwe na-emepụta ihe na-arụ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ ọ bụghị nanị na-emepụta ihe mkpuchi kaadị ọla edo na ọlaọcha, mkpuchi akwụkwọ pụrụ iche, ihe mkpuchi PU, mkpuchi akwa, ihe mkpuchi PP nke shei akpụkpọ anụ, ma na-emepụta ihe karịrị otu mkpuchi mkpuchi akpụkpọ anụ.
R18 bụ tumadi na nkwakọ ngwaahịa na akwụkwọ na oge nke ụlọ ọrụ.A na-eji ngwaahịa ya eme ihe na ekwentị mkpanaaka, ngwa eletrọnịkị,ngwa eletriki, ihe ịchọ mma, nri, uwe, akpụkpọ ụkwụ, sịga, mmanya na mmanya.
FD-AFM450A Onye na-eme ihe
Onye na-eme akpa akpaaka na-anabata sistemu nri akwụkwọ akpaka yana ngwaọrụ idowe kaadiboodu akpaka;e nwere atụmatụ nke ziri ezi na ngwa ngwa n'ọnọdu, na mara mma okokụre ngwaahịa wdg A na-eji na-eme ka zuru okè akwụkwọ cover, akwụkwọ ndetu cover, kalenda, nghọta kalenda, faịlụ na oge mgbe ikpe wdg.
CM540A Onye na-eme akpa akpaaka
Igwe eji akwa akwa FD-AFM540S
Igwe mkpuchi mkpuchi akpaaka bụ ụdị gbanwetụrụ site na onye na-emepụta akpa akpaka nke emebere ya maka itinye akwụkwọ ikpe dị n'ime.Ọ bụ igwe ọkachamara nke enwere ike iji dọba akwụkwọ dị n'ime maka mkpuchi akwụkwọ, kalenda, faịlụ lever, bọọdụ egwuregwu na ngwugwu.